15 အဘို့ရလဒ် chima games
chima အနွယ်တိုက်လေယာဉ်များ၏ Lego ဒဏ္ဍာရီ
အဆိုပါ Chima စစ်သည်တော်ခိုးယူခဲ့သူ၏နိုင်ငံကိုဘဏ္ဍာရှိသမျှ retrieve ရမည်ဖြစ်သည်။ လူအပေါင်းတို့သည်ခိုးယူဘဏ္ဍာကို retrieve မှအမျိုးမျိုးသောသတ္တဝါများဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည့်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေတွေကတဆင့်တိုး။
သငျသညျ Chima စီးရီးကာတွန်းထဲမှာခြင်္သေ့နှယျတူလုပ်ပါ။ ဒီဂိမ်းမှာတော့သူကသူ့ကိုရန်သူကျော်ခုန်အားဖြင့်ကမ္ဘာမြှားသွားလာကူညီတခုစွန့်စားမှုမြှားမြေကြီးတပြင်ရှိပါတယ်။
chima ၏ဒဏ္ဍာရီ: သစ်တောလမ်း
ခြင်္သေ့သည်နှယျတောအုပ်၌လိုက်ရှာခံများနှင့်သစ်တောရေလွှမ်းမိုးမှု၌ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအားဖြင့် လိုက်. မခံရ, လမ်းတစ်လျှောက်မှာတိရစ္ဆာန်နှင့်အတူသတိထားဖြစ်, သူ့ကိုလွတ်မြောက်ရန်ကူညီပေးရန်ပါ။
chima ၏ဒဏ္ဍာရီ: ပြေး
Chima ဘဏ္ဍာကိုရှာတွေ့မှလမ်းပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်။ သေမင်း၏သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့, ကြီးမားတဲ့ကျောက်ကိုသူရှေ့တို့အားဤသို့သောအဖြစ်ထောင်ချောက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သူ့ကိုဤစိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားကိုကူညီပေးပါ။
chima Jurassic ပန်းခြံ
သငျသညျ Chima ကိုချစ်သလား? ဒီ Chima ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, အဲဒီပျော်စရာပါပဲ။ Chima ဘယ်မှာအများအပြားဒိုင်နိုဆောများနှင့်မိကျောင်း, စောပိုငျးကာလအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ Chima သင်သည်ထိုသူတို့၏လိုက်စားမှလွတ်မြောက်ရန်ကူညီပေးပါတယ်။ အဖြစ်ဝေးရမှတ်တွေအများကြီးအဖြစ်ကို run ပါ။
chima ၏ဒဏ္ဍာရီ: လွှတ် Laval
Chima ဂိမ်း Legends ရှာဖွေနေပါသလား ကာတွန်းကွန်ယက်ပေါ်တွင် Laval တိုက်ဖျက်မည် Play! Cragger ၏ဗိုလ်ခြေ Chi ၏မြင့်မြတ်သောရေကူးကန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်! အ Crocs ရပ်တန့်ပါနဲ့အခိုးခံရ Chi Orbs retrieve ။ သဘာဝကိုယ်တိုင်က၏တန်ခိုးတိုက်ဖျက်မည်!
ed, edd ဎ Eddy ဂိမ်း
Cul-de-sac တပ်များအဘို့အဆင်သင့်ရ! ဒီဖြိုဖျက်ဒါဘီအတွက်သွားလာရင်း-လှည်း crash ကား Bash မှ Ed က, Edd, Eddy, ကီဗင်, ဂျင်မီ, ဒါမှမဟုတ်ရပ်ကွက်အတွင်းဂိုဏ်း၏မည်သည့်ကိုရွေးချယ်ပါ! ofunnygames မှာအွန်လိုင်းအခမဲ့ Ed က, Edd ဎ Eddy ဂိမ်း Play ။
သငျသညျ stickmen ၏ဦးခေါင်း snipe အဖြစ်သင့်သည်မြို့ရိုးကိုခုခံကာကွယ်။ သူတို့ကိုဆီးတားရန်သင်၏သေနတ်နှင့်မြို့ရိုးကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်။
ben 10 တပါးတော်ပီဒို
ဘင် 10, ဒီစူပါမစ်ရှင်၌သင်တို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှေ့ဆက်သွားနှင့်သင်၏ရှေ့မှောက်၌ပျေါပေါကျစခွေငျးငှါဖြစ်နိုင်အတားအဆီးများနှင့်ရန်သူနှင့်အတူညှိနေဖို့အမိန့်၌သင်တို့၏အကူအညီနှင့်နားလည်မှုကိုထပ်လိုအပ်ပါတယ်, သင်ပိုကောင်းမရှိအံ့သြဖွယ်ရှိသည်ဖို့ပြင်ဆင်